iMovie qaabab, Waxaad u qaabilsan dhoofinta iyo Can
Waa maxay qaababka karaa iMovie dhoofinta on iPhone / iPad ama Mac
Waa maxay qaababka karaa iMovie Import ka Mac ama iPhone / iPad
iMovie waa ka baxay tan iyo muddo ah hadda iyo waxaa lagu taageeray labada kombiyuutarada Mac iyo iDevices, dabcan la kordhin file kala duwan. iMovie - sida editor video hufan ee aaladaha Apple - kuu ogolaanaya in aad xaalkaa jecel aad video clips sida aad door bidayso. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu la dhaafi karin qaar ka mid ah marka ay timaado qaabab file in ay taageerto si ay iyaga diyaar u ah in aad xaalkaa ku.
Inkastoo iMovie ayaa files rakibo kala duwan ee Mac iyo iDevices, qaababkan video taageeray ee kombiyuutarada iyo Qalabka telefoonada gacanta labaduba waa isku dhow, laakiin qaraarkii screen kala duwan. Taas macnaheedu waxa weeye, ee kombiyuutarada Mac, xallinta screen of videos ka hor ama ka dib tafatirka sii joogi kartaa ilaa 1080p laakiin xal hoose ayaa loo baahan lahaa iPhone ama iPad ku xiran tahay nooc ka mid ah qalabka on.
Halkan waxa aad ku arki doontaa oo file qaabab waxaa taageera iMovie marka laga keeno iyo dhoofiyo ama ka computer Mac ama iDevice ah.
Qaybta 1: Waa maxay qaababka karaa iMovie dhoofinta on iPhone / iPad ama Mac
Iyadoo sixiddiisa files video isticmaalaya iMovie iyo dhoofinta (badbaadinayo) iyaga ku saabsan in aad computer Mac ama iPhone / iPad, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah qaababkan soo socda:
• MP4 (MPEG-4) - Tani waa qaabka ugu wanaagsan video in waxa taageeray iMovie, Mac, ama aaladaha kale ee Apple. File MP4 An dhoofin karo computer Mac ama iPhone / iPad iyo ciyaaray aad ciyaaryahan video doorbidayso. Waxaad si MP4 dhoofin karaan videos si aad u hesho size file yar oo aan laga badinin tayada.
• MOV (QuickTime Movie) - qaab A file video oo ay taageerayaan ku dhufto ee kale oo badan oo ay ka mid yihiin Windows, iwm files MOV leeyihiin kartaa macluumaad kale sida subtitles, saamaynta video, qoraalka, audio, iwm Ilaa iyo inta file MOV ah kuma jiraan codecs DIVX (oo lagama yaabo halka sixiddiisa faylka la iMovie), waxaa la dhoofin karo Mac ama iDevice ah oo ka furmay aad ciyaaryahan video jecel.
• AVI (Audio Video Interleave) - daayay by Microsoft ee bisha November 1992, AVI waa qaab saddexaad video caan ah oo file hadda. iMovie dhoofin karaan faylasha video inay qaab oo loo isticmaali karaa on Mac kombiyuutarada, iDevices, iyo qalabka iyo kombiyuutarada ka dhufto ee kala duwan.
• iskugu xigxigaan Image - Weli kale iMovie qaab ay u dhoofin karto video files. Si kastaba ha ahaatee, qaab file tani ma waxaa loo isticmaalaa oo ka mid ah dadka isticmaala ma aha sida loo jecel yahay sida ay saddex ku xusan yihiin. Qaab iskugu xigxigaan Image waxaa inta badan loo isticmaalaa sidii ka duwan meesha QuickTime looma isticmaali karo.
• DV - iMovie sidoo kale awood u dhoofiyaan files ee video digital (DV) qaab. DV waxaa loo isticmaalaa marka la qorayo videos la kaamirada. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho noocan ah file markaad arrimaha tayada wax soo saarka iyo video file size ma.
Inkastoo ay jiraan dhowr qaabab file kale in iMovie dhoofin karaan in ay Mac ama iPhone / iPad, kuwa wada hadleen kor ku xusan waxaa inta badan la isticmaalo milkiilayaasha Apple qalabka 'adduunka.
Fiiro Gaar ah : oo dhan qaabab kor ku xusan la jaanqaadaan iMovie u iPhone iyo iPad oo ay la socdaan kombiyuutarada Mac. Faraqa kaliya ee waa in qaraarkan screen ee wax soo saarka video in karaa ama laga yaabaa in aanay wax ka yar in la aqbali karo oo ku saabsan screens kombiyuutarka. Qaraarka oo ah video laga dhoofiyey ku xiran tahay tirada iDevice ku saabsan kuwaas oo waxaa loogu tala galay in la isticmaalo. Tusaale ku 4K video files aan lagu ciyaari karo iPhone ka weyn.
Qeybta 2: Waa maxay qaababka karaa iMovie Import ka Mac ama iPhone / iPad
Sida dhoofinta, inkasta oo ay jiraan qaabab dhowr ah in iMovie dajiyaan karaa computer Mac ama iPhone / iPad, ma dhan iyaga ka mid ah waa caan ah ama ay isticmaalaan inta badan isticmaala dunida oo dhan. Oo ah kuwa yar in ay ka qiimo hadlayaan waxaa ka mid ah:
• DV - iMovie dajiyaan karaa files DV ka kombiyuutarada Mac. Sida kor ku xusan, faylasha DV waa fiidiyo diiwaan videos in aad u weyn ee size laakiin aad u kacsan tayada. Files DV la keeno karo in iMovie, diinta qaab ka duwan doorbidayso, ka dibna dib ugu Mac ama iPhone dhoofiyo sida wax soo saarka final la daawado.
• AIC (Apple Dhexe codec) - Bixinta saarka tayo isku mid sida in DV, AIC, sida DV, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan tafatir dheeraad ah si ay u files video aan wax u dhimin tayada. Tan iyo AIC ayaa ku dhowaad dhammaan astaamaha iyo faa'iidooyinka DV, marar badan labada lagu hoos sharaxay qaybta caadi ah.
• MOV (QuickTime Movie) - Intaa waxaa dheer in dhoofinta aad video files si .MOV isticmaalaya iMovie, iMovie sidoo kale kuu ogolaanaya in aad soo dhoofsadaan qaab file, waayo, tafatir dheeraad ah. Ka dib markii isbedel la doonayo in faylasha, ay dhoofin karaa in .MOV ama qaab kale oo door bidayo kasta oo loo baahdo.
• AAC (Advanced sireed Audio) - iMovie sidoo kale dajiyaan karaa files AAC ujeedooyin tafatir dheeraad ah. AAC, kaas oo ah qaab file maqal ah waxay bixisaa size file yar oo kor u tayo dhawaaqa marka la nooca file MP3 marka la barbar dhigo.
Inkasta oo ay jiraan dhawr tifaftirayaasha movie u Apple madal iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah waa bilaash, iMovie waxay bixisaa ugu fiican fursadaha video tafatirka iyo taageerada kala duwan ee soo dejinta iyo dhoofinta file qaabab. Taas ayaa ka dhigaysa oo isu barnaamijka.
Sidoo kale, sababtoo ah iMovie waxaa laga heli karaa labada Mac iyo iDevices, aan la eegeyn qalabka aad isticmaasho, oo aad ka heli interface ka mid ah oo u fiiriyaan oo ay dareemaan, sidaas samaynaya aad aad u raaxo halka sixiddiisa videos ah.
Sida loo isticmaalo Maps iyo jeeda in iMovie u Mac
> Resource > iMovie > qaab imovie, waxa aad u dajiyaan karaa iyo dhoofinta?